Qisooyin qarracan leh oo ay ka sheekeeyeen dhalinyaro laga soo celiyay Liibiya - BBC News Somali
Image caption Dhalinayaro Soomaali ah oo laga soo celiyay Liibiya
Dowladda Soomaaliya oo gacan ka helaysa Hay'adda Caalamiga ah ee Sodcaalka ayey u suuragashay inay dalka dib ugu soo celiso boqolaal qof oo ka mid ah Soomaalida ku go'doomay dalka Liibiya, kuwaasi oo qaar ka mid ah sidii adoontii la kala iibsaday.
Kumannaan tahriibayaal Soomaali ka mid tahay oo Liibiya ku sugan
'' Waxaan ka tahribay magaalada Boosaaso safar dheer kaddibna waxaan gaaray Liibiya, balse dhibaatooyin badan ayaan kala kulmay dalkaasi, waxaana ka mid ah jirdil, in koronto lagu qabto dadka iyo in la kala iibsado dadka kaddib marka laga qaato lacagaha madaxfurashada ah'', ayuu yiri cabdullaahi Iidile oo ka mid ah dhallinyarada maanta dib ugu laabtay Muqdisho.
Maryam Yaasiin Xaaji Yuusuf, oo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya u qaabilsan xuquuqda carruurta iyo tahriibayaasha kana mid ah mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ay u xilsaartay dib u soo celinta dhalinyarada ku xiran xabsiyada Liibiya, ayaa sheegtay inay jiraan dhallinyaro badan oo wali ku harsan liibiya.
''Waxaan baaq u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed tahriibka halistiisa aad ayuu u badan yahay, marka intii Magafe iyo dhibaato kale waddan kale kugu qabsan lahaayeen, dalkaada hooyo inaa joogto ayaa roon'' ayay tiri Maryam.
Tahriibayaal ku dhintay doon ku qalibantay xeebaha ka baxsan Masar
Ku dhowaad 100 Tahriibayaal ah ku qarqamay badda Liibiya
Tahriibayaal ay ka mid yihiin Soomaali oo xeebaha Yamen loogu daadiyay